Frank Lampard Oo U Jawaabay Jose Mourinho Ka Dib Cabashadii – Axadle
Frank Lampard Oo U Jawaabay Jose Mourinho Ka Dib Cabashadii
Tababaraha Chelsea Frank Lampard ayaa soo jeediyay in jadwalka kulamada Tottenham inuusan ka adkeyn kooxaha kale inkastoo uu Jose Mourinho cabasho ka muujiyay kulanka Carabao Cup.
Spurs ayaa ku bilaabatay xilli ciyaareedka inay dheelaan kulamo badan oo isku xigxiga, iyadoo ciyaaraya afar kulan oo Premier League ah, seddex kulan oo isreebreebka Europa League ah iyo labo kulan oo koobab maxaliga ah inkastoo kulankoodii wareega 3aad ee Carabao Cup ee ay la ciyaari lahaayeen Leyton Orient la kansalay ka dib markii Korona Fayras laga helay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda heerka afaraad.
Tottenham ayaa guusha loo qoray kulankaas iyagoo haatan martigelin doona wareega 16ka kooxda Chelsea inkastoo kooxda Tottenham ay qasab ku aheyd inay u safraan Macedonia Khamiistii la soo dhaafay si ay u la ciyaaraan Shkendija.
Labo maalmood ka dib waxay la ciyaareen Newcastle, haatana sidaas oo kale ayaa wajahayaan ka dib kulanka habeen danbe ee Chelsea waxay habeenka Khamiista u safrayaan kooxda Maccabi Haifa ka hor inta aysan u safrin Old Trafford Axada.
Mourinho ayaa cabasho xoogan ka muujiyay jadwalka kooxdiisa isagoo sheegay inay halis gelineyso ciyaartoydiisa, wuxuuna shaaciyay inuu ciyaartoy da’ yar soo safi doono kulanka habeenka danbe ee Carabao Cup, laakiin Lampard ayaan wax naxariis ah u heynin macalinkiisii hore isagoo sheegay in koox walba ay dhibaato u gooni ah heysato.
Markii la weydiiyay hadalada Mourinho, Lampard ayaa ku jawaabay: “Haa, waan ogahay taas, waan ogahay Jose in waqti mashquul badan ay u tahay Tottenham sababtoo ah ka qeyb qaadashadooda Europa League.
“Dhamaanteen ayay waqti mashquul badan inoo tahay. Fasax ayay ahaayeen bartamihii isbuuca, inagu ma aanan aheyn.
“Waan ogahay inay isbuuc mashquul ah galayaan haatan. Laakiin marka aan qiimeeyay Tottenham iyo ciyaartoyda ay heystaan, waxaa ku jira xiddigo aan 90 daqiiqo dheelin shalay.
“Waxay heystaan ciyaartoy fantastik ah, sidaasi darteed waxaan qabaa in koox walba uu Jose soo safo inay adkaan doonto.”
in Kenya, restrictions are eased, but schools remain closed